Beauty Lies Within(Rohto)
မေမေတွေ နို့တိုက်ခေါင်းအုံး တစ်ကယ်လိုအပ်ရဲ့လား? 🤱🏻🤱🏻🤱🏻 ရင်သွေးလေးတွေကိုနို့ချိုတိုက်ကျွေးချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ မေမေတွေမှာ ဇာတ်ကြောတွေတက်လာတယ်၊ ခါးကြောတွေတောင့်တင်းညောင်းညာတယ်၊ ပခုံးနာကျင်မှုတွေကို စတင်ခံစားလာရပါတယ်။ တချို့ကလေးတွေကို ၄၅မိနစ် ၁နာရီနီးပါး နို့စို့လေ့ရှိပါတယ်။ ဘေဘီလေးတွေ နိုးသွားမှာစိုးလို့ ငြိမ်ငြိမ်လေးအညောင်းခံ နို့တိုက်ရတဲ့ ဒုက္ခကိုမိခင်တွေပဲသိပါတယ်။ နို့ချိုတိုက်ကျွေးစဉ် ရင်သွေးငယ်ကော မိခင်ပါ သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် နို့တိုက်ခေါင်းအုံးက အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ နို့တိုက်ခေါင်းအုံးကြောင့် ကလေးငယ်ကိုအဆင်အပြေဆုံးအနေအထားမှာထားနိုင်တဲ့အတွက် မိခင်လည်း နို့ပိုထွက်ပြီး ကလေးငယ်လည်း နို့ပိုစို့ဖြစ်ပါတယ်။
မေမေတွေ နို့တိုက်ခေါင်းအုံး တစ်ကယ်လိုအပ်ရဲ့လား? 🤱🏻🤱🏻🤱🏻
ရင်သွေးလေးတွေကိုနို့ချိုတိုက်ကျွေးချိန်ကြာမြင့်လာတာနဲ့အမျှ မေမေတွေမှာ ဇာတ်ကြောတွေတက်လာတယ်၊ ခါးကြောတွေတောင့်တင်းညောင်းညာတယ်၊ ပခုံးနာကျင်မှုတွေကို စတင်ခံစားလာရပါတယ်။ တချို့ကလေးတွေကို ၄၅မိနစ် ၁နာရီနီးပါး နို့စို့လေ့ရှိပါတယ်။ ဘေဘီလေးတွေ နိုးသွားမှာစိုးလို့ ငြိမ်ငြိမ်လေးအညောင်းခံ နို့တိုက်ရတဲ့ ဒုက္ခကိုမိခင်တွေပဲသိပါတယ်။
နို့ချိုတိုက်ကျွေးစဉ် ရင်သွေးငယ်ကော မိခင်ပါ သက်တောင့်သက်သာရှိစေရန် နို့တိုက်ခေါင်းအုံးက အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ နို့တိုက်ခေါင်းအုံးကြောင့် ကလေးငယ်ကိုအဆင်အပြေဆုံးအနေအထားမှာထားနိုင်တဲ့အတွက် မိခင်လည်း နို့ပိုထွက်ပြီး ကလေးငယ်လည်း နို့ပိုစို့ဖြစ်ပါတယ်။
Electric Porridge Cooker
Original Fried Potato Chips
Signature Short Sleeve Shirt-ST-312
Muscle Energy Cookie (Chocolate Flavor) 21g*12 pcs
Keenji Canon Wafer Stick (Cheese Flavor) 11g*20pcs
Beauty Lies Within(Rohto) |
Payday Promotion |
Laundry Fair |